Isu tinobvunzurudza Luis Iván Cuende kutanga kweLxA | Linux Vakapindwa muropa
Luis Iván Cuende haadi mharidzo dzakawandisa Zvino, asi kune avo vasina kunyatso ziviswa nenyika ino, taura kuti uyu Asturian akatanga munyika yesoftware aine makore gumi nemaviri, iro zera raakawana mahara software uye akatanga kuyedza naro. Asturix ndeimwe yemapurojekiti ake, kugoverwa kweGNU / Linux kunobva paUbuntu kuchazivikanwa nemunhu wese.
Zvakare, Cuende akasimuka kuita mukurumbira paakakunda iyo mubairo weakanakisa mudiki mugadziri muEurope muna 2011. MuBerlin akapihwa mubairo webasa rake, achizadzisa kucherechedzwa kwemubati wepamusoro weEuropean pasi pemakore gumi nemasere ekuberekwa. Mushure meizvi, mamwe mapurojekiti aiuya, mamwe aine budiriro shoma senge kambani yeHolalabs, asi mamwe akaita saStampery, ayo aanotiudza nezvake mubvunzurudzo yavanotaura nezvayo.
Linux Vanopindwa muropa: Uyu mubvunzo unogara uchisimudzira kufarira vaverengi. Iko kugovera kwauri kushandisa parizvino?
Luis Ivan Cuende: Ini ndinoshandisa Arch Linux, ndinongoda kuburitswa kuburitswa.
LxW: Asturix, Holalabs, chipangamazano weVice-Mutungamiri weEuropean Commission (Neelie Kroes), Cardwee, Asturix On, Asturix People, Asturix Incubator… Zvino chii?
LiC .: Iye zvino ndiri neStampery! Iyi inzira nyowani yekusimbisa data, uchishandisa tekinoroji iri kumashure kweBitcoin, blockchain.
LxW: Chero rakavhurika chirongwa (software kana zvimwe) uye zvazvino zvinonyanya kukushamisa?
LiC: Bitcoin, Augur, Ethereum ...
LxW: Kugadzira nzira yako mune yemakwikwi akadaro nyika inombonetsa, kunyanya kune avo vasina mari. Kubva pane chako chiitiko, chero zano kune vezvemabhizimusi avo vanotiverenga?
LiC: Gadzira chiratidzo chakajeka chekuti nyika inofanira kunge yakaita sei mumakore gumi kana akati wandei.
LxW: Nezve izvo zvataurwa pamusoro, iwe unofungei nezve crowdfunding?
LiC: Ndinoona ichifadza kwazvo! Mapurojekiti akaita seTebble akauya pamberi kuvonga kwavari. Iko kune kwechokwadi kugadzirwa. Asi kune zvakare vanhu vazhinji vari kuita purofiti, vachitengesa utsi.
LxW: Gore iri inyaya inoshungurudza Stallman. Asi kune mapurojekiti anonakidza uye zvinoita sekunge ichave neramangwana rakanaka (uye nerino). Pros uye Cons?
LiC: Pros: zvirinani mushandisi ruzivo pane zvakawanda zvigadzirwa. Con: kurasikirwa kwekutonga uye kuvanzika. Ndiri kufarira kwazvo dhatabhesi mapurojekiti ayo anotendera iyo yekutsvaga yakavanzika ruzivo, inogona kuvhura mikova yakawanda uye kubvisa zvakashata zvegore.
LxW: Iwe unofunga kuti cryptocurrencies inogona kuva mhinduro yemamiriro azvino? Uye tiudze zvishoma nezve Stampery.
LiC: Hapana mubvunzo! Kwete chete yedambudziko, asi kazhinji kudzosera rusununguko kune avo vanokodzera. Stampery inobvisa kudiwa kwekuvimba, uchishandisa blockchain, inoiswa munzvimbo, kupa nzira iri nani yekusimbisa data.
LxW: Patakabvunzana naRichard Stallman, airatidzika kunge ane hanya ne "mabhurumu" ayo anosanganisira mamwe mazamu akaita seLinux neFreeBSD. Ndeipi pfungwa yako pane izvi?
LiC: Icho chinetso, pasina kupokana, uye kwete zvehutsanana, asi nekuti nguva dzese dzatinoona kuti masangano enjere anosanganisira akawanda uye akawanda kumashure kwese kwese.
LxW: Iwe unofungei nezvekufamba kweCanonical kuri kugadzira neiyo Snappy mapakeji?
LiC: Ndinoyeuka mazuva andaigara ndichirongedza. Yakanga yakaoma kwazvo. Zvinotaridza kwandiri kunge kufamba kwakanaka kuchazopedzisira kwave nhanho kumberi kwenzvimbo yese.
LxW: Iwe une nguva yevaraidzo yedhijitari? Handizivi ... Unofarira mitambo yemavhidhiyo? Iwe unofungei nezve Steam OS uye Steam Machine, yekuwedzera kwechikamu ichi muLinux nyika?
LiC: Handina nguva yakawanda, asi ndinoedza kusapedza nguva yakawandisa pamberi pemamwe masikirini. Ini handisati ndambove fan wemitambo mune zvese futi. Zvisinei, ndinoziva kuti vanhu vazhinji vanoita, uye nhanho yakatorwa naSteam inoita kunge yakakura kwandiri.
LxW: Yemahara software uye dzidzo, maviri mazwi anogona kuve makuru vanobatana. Mubhuku rako "Ndine makore gumi nemasere uye handina kudzidza kana kushanda: Ini ndinotanga makambani uye ndakagara ndichiita zvandinoda!" Iwe unotsaurira yakakwira muzana mapeji kuti utaure nezve iyo sisitimu yedzidzo kana kuti pane zvakakanganisika uye mhinduro dzinogona kuitika. Vamwe vanhu havanzwisise kuti dzidzo ndiyo hwaro uye inofanira kuve yekutanga muzvirongwa zvemagetsi zvevematongerwo enyika. Kune rimwe divi, kuSpain chinhu chega chinoitwa nevezvematongerwo enyika kutsiva mutemo nguva dzese panenge paine shanduko yehurumende uye zvinoshatisa… (ndinofunga kuti naWert patova ne18 yekuvandudza dzidzo).
LiC: Hazvina kumbotaurwa zvirinani, vanhu vazhinji havazvizive asi zvirokwazvo, dzidzo nhasi indoctrinates. Yemahara software inhanho kumberi mukuderedza kudzidziswa, zvichitungamira kune zvematongerwo enyika mhinduro uye kukurudzira, pane kuraira, vadzidzi.
LxW: Yunifomu, mabhero, hierarchies, makirasi akasarudzika, nzvimbo dzakapfigwa, nhamba dzakanyorwa, zororo (apo vadzidzi pavanokwanisa kuenda kupatio kunorovedza muviri, kutambanudza makumbo avo kana kuva nezuva shoma ...), mitemo, kuteerera, kuraira, zvikamu zve chirango, kurangwa, bvunzo dzepanguva nenguva, zvisungo nemabasa, ... Nekunyora mazwi aya vanogona kureva zvese jeri nenzvimbo yekudzidzisa. Iri idambudziko, haufunge?
LiC: Iri idambudziko guru, uye ndicho chikonzero chikuru chekuti tinosangana nemamiriro ezvinhu anotyisa muSpain. Dambudziko nderekuti dzidzo inotora makumi emakore kubvira payakachinjwa kusvika michero yayo yaonekwa, saka tatova makore angangoita makumi maviri kumashure tisingazombopora.
LxW: Asi zvakare ndezvekuti, muzvikoro zvakawanda zvakazvimiririra, vava kumanikidza vadzidzi vavo kutenga akateedzana ezvigadzirwa zveApple (haigone kuve imwe mhando), senge iyo iPad, uye ivo vanotenda kuti ndivo vari pamberi pedzidzo yeizvi . Uye chii chinoitika kana mudzidzi achida piritsi kubva kune chimwe chigadzirwa uye neni neimwe sisitimu yekushandisa? Uye kana uchitova nehwendefa reApple, unofanirwa kutenga iyo iPad ye…? Pandakafunda, mazhinji emakomputa aive pakati aive ne Microsoft Windows yakaiswa (chete mamwe emakirasi ehunyanzvi aive neRed Hat distro, kudzamara Junta de Andalucía "yaunza" iyo Guadalinex kunzvimbo dzeveruzhinji), asi hapana kana mumwe chete yakatemwa iwe software kana system yekushandisa. Zvino tava kutora nhanho kudzokera kumashure… Iwe unofungei?
LiC: Kuseka kuya. Kuwedzera pakuva varidzi, ivo anodhura kwazvo. Iwe unofanirwa kuziva kuti vanhu vazhinji havagone kuzvitenga. Dzidzo inofanira kunge ichibatanidza, ndinofunga izvo zvinonzwisisika.
LxW: Stallman akati proprietary software yakafanana nemishonga, kutanga vanokupa mahara emiedzo uye paunosungirwa vanoita kuti iwe ubhadhare. Microsoft neApple, kutumidza makambani mashoma, tevera nemaune izvi. Kana vadzidzi vakadzidziswa nemidziyo iyi, vanozoda maturusi aya mubasa ravo mune ramangwana. Icho chinhu chakadai sezvakaitika neUNIX, yakashandiswa mundima yezvidzidzo uye gare gare nemhedzisiro huru mumunda webhizinesi sezvo vakapedza kudzidza vakashandiswa kushanda neiyi sisitimu uye vakaishandisawo mumakambani avo, handiti?
LiC: Ini ndinobvuma, asi ini handizvione sezvakakosha zvakanyanya nekuti tiri kutarisana nerufu rwekutengeswa kwesoftware. Uye kunyanya kubva kuOS. Kwandiri, kunetsekana kwakanyanya inyaya yekuti zvese ecosystems inoramba ichivharwa, saka paunongopinda imwe haubve.
TxA: Kuenderera mberi nedzidzo, zita rangu Asakeva aive nemafungiro ekuti, uye ini ndinotora mazwi ake, "Dzidzo-yekuzvidzidzisa dzidzo, ndinotenda zvakasimba, ndiyo yega dzidzo iriko." Uye akanongedzera kuInternet senzvimbo inogona kudzidza. Unobvumirana nazvo here?
LiC: Hapana mubvunzo. Kuva wega-kudzidziswa kunogadzira yakawanda yekuzvitonga. Iyo zvakare inovandudza kugona kwekusefa zvemukati. Zvese hunhu hunoita kuti uve munhu ari nani uye nehunyanzvi.Munhu anozvidzidzisa ane mikana yakawanda kupfuura uyo asina kugona uku, sekungofanana nemunhu ane Indaneti anogona kuenda zvakanyanya kupfuura mumwe asina mukana iwoyo.
LxW: Mubhuku rako iwe unotora chirevo kubva kuna Albert Einstein: "Sei uchiisa mumusoro izvo zvakatonyorwa mumabhuku." Dai yakagadziridzwa kana kuwedzerwa neshoko rekuti "Internet", pachinzvimbo chemabhuku, inogona kunge ichishanda kwenguva itsva yatiri kurarama. Uye izvi zvinonditungamira kuti ndirangarire musangano naJavier Martínez wakanzi "Iwe wakangwara kupfuura kambani yaunoshandira". Javier anovhara musangano uyu achiti tinoda masystem akangwara anotitumira ruzivo rwakakodzera panguva chaiyo yatinochida uye tisingafaniri kuenda tichichitsvaga. Uye zvinosuruvarisa kuti ndinokubvunza iwe, iwe unofunga kuti kana kugadzirwa kwemuchina wekudhinda kusingakwanise kuchinja yedu yekudzidzisa (kana iyo Internet, zvirinani zvakanyanya), iyi tekinoroji nyowani iyo Javier inotaura nezvayo inogona kuichinja?
LiC: Ini ndinotenda kuti iyo edzidzo sisitimu ichagadziriswa apo: a) varairidzi avo vanofanirwa kubhadhara zvakanyanya vanobhadharwa, uye avo vasina kudzingwa. b) Huwandu hukuru hwevanhu vasina kugona vasina kuvandudza basa ravo kwemakumi emakore vanotanga kuenda pamudyandigere.
LxW: Chero chirevo chedzidzo? Semuenzaniso, Finland ine yakanaka dzidzo sisitimu uye nyika dzeNordic dzinowanzo kuve noutano hwakanaka mune izvi.
LiC: Ini ndinoda chaizvo zvavari kuita neDraper University. Icho chinhu chakasarudzika mune vezvemabhizimusi asi chirongwa ichi chinoita kunge chine hutsinye kwandiri.
LxW: Pasina nguva refu ndichiverenga chinyorwa pamusoro pekukosha kwedzidzo yeSTEM, kana seSITEM (sainzi, Tekinoroji, Injiniya neMathematics) inonzi pano, kusimudzira nyika, zvine makwikwi uye nehupfumi. Unofungei?
LiC: Zviri pachena kuti nyika isina tekinoroji ine dambudziko. Nekudaro, ndinotenda kuti hapana chinhu kunyanya chinofanira kupihwa kukosha, asi kuti mudzidzi wega wega anodzidza zvinokumbirwa nemuviri kwaari.
Ndinovimba wakazvifarira hurukuro ine mwero kune hunhu hukuru. Usakanganwa kusiya ako makomendi uye fungidziro.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Misangano / Zviitiko / Hurukuro » Luis Iván Cuende anotibatsira kuvhura maziso edu muiyi bvunzurudzo